Posted by Tranquillus | Nov 28, 2018 | Ny fahaiza-manaon'ny serasera sy ny serasera
Taorian'ny lahatsoratray momba ny fomba fanolorana amin'ny mailaka Miala tsiny amin'ny mpiara-miasa aminy izyIreto misy soso-kevitra vitsivitsy amin'ny fialantsiny amin'ny mpanara-maso iray.
Miala tsiny amin'ny mpanara-maso iray
Mety mila miala tsiny amin'ny mpanara-maso anao ianao na inona na inona antony: fihetsika ratsy, fanemorana asa na asa tsy dia tanterahina, fanemorana miverimberina, sns.
Toy ny fialantsiny amin'ny mpiara-miasa aminao, ny mailaka dia tokony hampidirina tsy fialan-tsiny ofisialy fotsiny, fa koa fahatsapana fa fantatrao fa diso ianao. Tsy tokony hanome tsiny ny sefonao ianao ary ho sosotra!
Ankoatra izany, io mailaka io dia tokony hampidirina amin'ny fanomezan-toky fa tsy hamerina ny fihetsika izay nahatonga anao hiala tsiny, noforonina araka izay azo atao.
Ity misy maodelim-mailaka hifonana amin'ny mpanara-maso anao amin'ny endrika mety, ohatra, raha misy asa naverina tara:
Maniry aho amin'ny alalan'ity hafatra fohy ity mba miala tsiny noho ny fahataran'ny tatitra nataoko, izay natolotro tamin'ity maraina ity teo amin'ny biraonao. Noraisin'ny toetrandro ny toetr'andro ary ny laharam-pahamehako dia sahirana. Manenina amim-pahatsorana tanteraka ny tsy fahampian'ny fahaiza-manaon'ity tetikasa ity aho ary mahatsapa ny fahasarotana mety ho nahatonga izany.
Te-hanamafy aho fa mazoto mazoto amin'ny asako aho. Tsy hipoitra indray ny banga eo amin'ny varotra.
Modely mailaka noho ny fialantsiny amin'ny mpanara-maso iray 22 Novambra, 2020Tranquillus
HAMAKY Ampidiro amin'ny fehezanteny mihaja: Azo antoka ve fa ampiasainao tsara izany?
Teo alohaModely mailaka miala tsiny amin'ny mpiara-miasa
manarakaFamoronana mailaka hamaliana fangatahana fampahalalana avy amin'ny mpiara-miasa iray
Manorata mailaka ao anaty tontolo matihanina
Ahoana ny hanoratana tatitra iray mahakasika?